नश्वर पापको ग्रीक भिक्षु Evagrius Pontus सारा सिस्टम द्वारा ख्रीष्टियन सुरुतिर मा यो समयमा घमन्ड, डाह, sloth, रिस, कामवासना, लोभ र gluttony समावेश formulated थियो। त्यहाँ सात गरिएको छ। बाल्यकाल देखि मसीही उहाँले बिहान त आलस्य रूपमा, देर रात सम्म काम गर्न छ प्रेरित - यो एक नश्वर पाप हो। gluttony, पनि, एक नश्वर पाप थियो किनभने मसीहीहरूले गरिबी खुवाइन्छ। तिनीहरूले पनि गर्व ईर्ष्या, लोभी, lustful र दुष्ट हुन सक्दैन। तर केही समय पछि, यो सूची थप दयालु, त्यसैले बोल्न गरे।
निराश - पाप
मान्छे, नरक अनन्त सास्ती मा हुनुको डर बावजुद, तपाईं अझै पनि आफूलाई सांसारिक amusements र मोजमस्ती को वंचित गर्न चाहँदैनन् थियो। एक शारीरिक वा मेरो साथीहरूसँग भोज आफैलाई व्यवहार कसरी होइन? त्यसैले, केही प्रतिबन्ध सम्पादन र घातक पाप सूचीमा नरम गरिएको छ। उदाहरणका लागि, पोप Grigoriy Veliky हटाइएको को घातक पाप सूची व्यभिचार, र पवित्र पुर्खाहरूले यो आलस्य र gluttony देखि फिर्ता लिया छ। केही पाप सबै मानव को श्रेणी मा सारियो छन् "कमजोरी।"
, यो जस्तो थियो मानव प्राण को सम्पत्ति बिल्कुल अहानिकारक छ - तर, अर्को रोचक, पोप Grigoriy Veliky, व्यभिचार पाप बाहिर चिकना आफ्नो बगालको पश्चात्ताप र प्रार्थना गर्न अनुमति दिने, अचानक बनाउँछ घातक पाप सूची दुःखलाई। यो दुःखलाई सूचीमा सधैं थियो, र थप के, यो दिन धेरै ब्रह्मविज्ञानियों, सबै नश्वर पापको उहाँलाई विचार सबैभन्दा गम्भीर भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ।
नश्वर पाप - निराश
त्यसैले किन निराश मानिन्छ एक नश्वर पाप? मानिसहरूलाई - यो कुरा यो सबै गर्न पूर्ण indifferent, र विशेष गरी देखिन्छ, एक व्यक्ति सम्पत्तिको दुःखलाई लिन्छ, यो फिट गर्न एक सानो हुन्छ भन्ने छ। उहाँले पर्याप्त र गुणात्मक काम, काम गर्न सक्षम गर्न सक्नुहुन्न, मित्रता र प्रेम संग खुसी पनि छैन। यसलाई त्यसैले ठीकै एक नश्वर पाप रूपमा निरुत्साहित श्रेय थियो, तर यो सूची हटाइएको कामवासना र व्यभिचार देखि केही गरे।
तिर्सना, दुःख, निराशा, दुःख, दुःख ... यी शक्ति अन्तर्गत Falling भावनात्मक अमेरिका, हामी पनि तिनीहरूले नकारात्मक छन् र क्रशिंग शक्ति के सोच्न छैन। धेरै यो रहस्यमय रूसी प्राण केही subtlety राज्य छ भन्ने विश्वास गर्छन्, यो मा, मलाई लाग्छ, त्यहाँ केही सत्य हो। आत्महत्या - तर चिकित्सक यो सबै धेरै खतरनाक घटना हो, र यो हालत मा एक लामो बसाइ निराशा र कहिलेकाहीं सबैभन्दा irreparable निम्त्याउँछ भन्छन्। यसैले चर्च पाप नश्वर निराश ठान्नुहुन्छ।
निराश वा दुःख?
निराश - एक नश्वर पाप, त्यहाँ दुःख छ क्याथोलिक चर्च मा गर्दा घातक पाप बीच अर्थोडक्स धर्मशास्त्र, एक अलग पाप रूपमा उपचार छ जो। धेरै यी भावनात्मक अमेरिका बीच कुनै पनि विशेष फरक देख्न सक्नुहुन्छ। तर दुःख केही अप्रिय घटना वा घटना सम्बद्ध अस्थायी मानसिक विकार केही प्रकारको रूपमा देखिन्छ। तर निराश एक व्यक्ति पीडित र उनको हालत पूर्ण बाह्य राम्ररी जा मा पनि छ व्याख्या गर्न सक्दैन जब कुनै कारणले उत्पन्न हुन सक्छ।
यो सबै तापनि मण्डली कुनै पनि परीक्षण मन, वास्तविक विश्वास, आशा र प्रेम को खुसीसाथ राज्य संग बुझ्ने गर्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्दछन्। अन्यथा यो व्यक्ति परमेश्वर, संसार र मानिसको एक सम्पूर्ण सिद्धान्त वा शिक्षालाई पहिचान गर्दैन बाहिर जान्छ। unbelief यस प्रकारको जसबाट मानसिक रोग मा मानिस dooming, आफै गर्न प्राण दिन्छ।
नीरस - यति विश्वास नगर्ने
यस्तो नश्वर पाप (निरुत्साहित), खराब razlenenie रूपमा उल्लेख यो मानिसको अधीनमा अल्छी हुन थाल्छ र यो सान्त्वनादायी र खुसी केही छ रूपमा आफूलाई आवश्यक जीवन सुरक्षित कार्यहरू गर्न जबरजस्ती गर्न सक्दैनन्, त्यो केहि विश्वास र छैन पनि आशा छैन गरे। अन्ततः, यो सबै आफ्नो शरीर यसलाई जलाएर मानव प्राण, एक प्रत्यक्ष प्रभाव, र त्यसपछि छ। निराश - मन को एक weariness, आत्मा र परमेश्वरको अभियोग nechelovekolyubii आराम र कुनै कृपा छ।
निराश को लक्षण
यसलाई जो देख्न सकिन्छ समयमा लक्षण, विनाशकारी प्रक्रिया थाले पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो निद्रामा विकार (निदाउरोपनको वा अनिद्रा), आंत्र बानी मा असफलता (कब्जियत), भोक मा परिवर्तन (ज्यादा वा भोक), यौन गतिविधि, थकान मानसिक र शारीरिक तनाव अन्तर्गत, साथै दुर्बलता, कमजोरी, पीडा रूपमा पेट मा, घट्यो मांसपेशी र हृदय।
आफै संग र परमेश्वरको संग संघर्ष
द्वन्द्व, मुख्यतया एक बिस्तारै संग जैविक रोग outgrow गर्न थाल्छ। निराश - खराब मुड र मन को निराश राज्य, एक सँगसँगै बलको हानि। यसरी, पाप मानव प्रकृति मा बढ्छ र चिकित्सा पक्ष प्राप्त छ। आफूलाई साथ र परमेश्वरसित मेलमिलाप - यस्तो मामला मा अर्थोडक्स चर्च मात्र रिकभरी एक तरिका प्रदान गर्दछ। र यो लागि यो नैतिक आत्म-पूर्णता संलग्न आवश्यक छ, र नै समय आध्यात्मिक र धार्मिक प्रयोग psychotherapeutic प्रविधी र विधिहरू मा।
एक व्यक्ति अवसाद देखि पीडित, यो उहाँलाई यो भयानक अवस्था बाहिर गर्न मद्दत गर्न, आफैलाई विहारको एक अनुभवी आध्यात्मिक बुबा फेला पार्न उचित हुन सक्छ। सम्म यो एक गहिरो मानसिक कष्ट स्रोत, विहार केही समय खर्च गर्न हुन सक्छ के बुझ्न छैन उसलाई कुराकानीमा धेरै घण्टा पछिल्लो गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि मात्र तपाईं प्राण व्यवहार गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। दुःखलाई पछि - यो अझै पनि उपचार योग्य छ कि एक गम्भीर रोग हो।
शारीरिक र मानसिक रोग यस प्रकारको सामना गर्न निर्णय गरेको छ जो एक मानिस, तुरून्त आफ्नो जीवन शैली परिवर्तन र सक्रिय inchurching सुरु गर्न आवश्यक छ। धेरै मानिसहरू एक गम्भीर रोग हो र आफ्नो पापी जीवन को समझ निम्त्याउँछ, त्यसैले तिनीहरू सुसमाचार तरिका एक तरिका खोज्न थाल्छन्। महत्त्वपूर्ण अर्थोडक्स चिकित्सा - एक बिरामी व्यक्ति प्राप्त आफ्नै नापसंद र विचार, शरीर र प्राण विनाश तमाम प्रक्रिया जोडिएको जुन छुटकारा मदत गर्न। एकै समयमा एक विश्वासीले, रोग आइपर्दा परित्याग र एक स्वास्थ्य हेरविचार पेशेवर देखि हुँदैन। परमेश्वरले पनि, र यो हरेस - - सबै पछि, यो छ निन्दाले सृष्टिकर्ता गर्न त।
Aust कसरी घर मा बीउ देखि बढ्न?
इथानोल - यो के हो? इथेनल को गुण। इथेनल को प्रयोग
Virgo को लागि के पत्थर उपयुक्त छ? शरदको सबै रंगहरू
अदरक संग चिया - सबै स्वाद को लागि व्यञ्जनहरु
बायाँ मा छाती मा दुखाइ। के यो कारण?
Troparia - यो के हो? troparia के हुन्। जब उनि कार्यान्वयन गर्दै
स्ट्रोम: "तितली" संग एक रैपर को जीवनी
टर्की, Alara होटल kum 5: * समीक्षा